Safal Khabar - फोब्र्सको सूचीमा परेकी गल्फ खेलाडी प्रतिमा भन्छिन्, ‘कोरोनाले खुशी साँट्नै पाइनँ’
शनिबार, २२ चैत २०७६, ०८ : ०१
छोरीको प्रगतिबारे आमा कल्पनालाई त्यति धेरै थाहा छैन । तर जे–जति प्रतिमाको साथीबाट सुनेकी छिन् त्यसमा उनको एक मात्र सन्तानप्रति गर्व छ । “तपार्इंको छोरीले राम्रो गरिन्, नाम कमाइन्”, बिहीबार साँझ काठमाडौँमा रहेका प्रतिमाका साथीहरुले फोनमा सुनाएको खबरबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै आमा कल्पनाले भनिन् । फोब्र्सको सूचीबारे भने उनलाई कत्ति पनि थाहा छैन । “एक हप्तादेखि इन्टरनेट चलाउन पाएका छैनौँ, खबर के हो थाहा छैन”, शुक्रबार मध्याह्न रासससित फोनमा कुरा गर्दै कल्पनाले भनिन् । गल्फ खेलमा राम्रो गरेकै कारण छोरीले नाम कमाएको भन्ने कुरा मात्र उनले बुझेकी छिन् । गौचरनस्थित गल्फ मैदानमा काम गरेको २२ वर्षपछि उनले जागिरबाट अवकाश पाएकी छिन् । उनले अहिले पनि त्यो मैदानमा पानी हाल्ने, घाँस काट्ने तथा मैदान चुस्तदुरुस्त पार्ने काम गर्दै आएकी छिन् । प्रतिमाका बुबा पासाङ पनि त्यही खेलमैदानका सुरक्षागार्ड हुन् । बाबुआमा नै गल्फमै समर्पित भएका कारण प्रतिमालाई यो खेलमा लाग्न सहज भएको हो । उनले त्यही भएर खेल्ने वातावरण पनि पाइन् । आमा कल्पनाले जस्तै बुबा पासाङले पनि गल्फमा छोरीले राम्रो गरिन् भन्ने मात्र थाहा छ ।
“के–कसरी नाम कमाइन् भन्ने थाहा छैन, जे गरेको भए पनि खुशी छौँ”, उनले खुशी प्रकट गर्दै भने । कोरोनाको त्रासले गल्फ खेल्न तथा अभ्यास गर्न कोही नआएकामा शेर्पा दम्पतीको मन खिन्न भएको छ । “सुनसान छ, कोरोनाको त्रासपछि यहाँ अचेल यहाँ चराको आवाज पनि सुनिन्न”, उनले भने । लकडाउन अघि ५०÷६० जना नियमतरूपमा अभ्यास गर्न आउने गरेका शेर्पाले सुनाए । उनीहरुको मनमा छोरी प्रतिमाको जति माया छ त्यत्तिकै त्रास कोरोना भाइरसको पनि छ । “यस्तै त कतिसम्म रहला र गल्फ मैदानभित्र चाँडै पहिलाकै जस्तै चहलपहल भइहाल्ला”, उनीहरुले आशावादी हुँदै भने । प्रतिमाको प्रगति उसकै मुखबाट सुन्ने प्रतिक्षमा शेर्पा दम्पती छन् । उनीहरु अमेरिकाबाट छोरी चाँडै फर्कने प्रतिक्षा गर्दै विमानस्थलको बाटो हेरी बसेका छन् ।
एसियाका प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा गल्फ खेलाडी प्रतिमा
कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै संकटमा पारिरहेको बेला अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले घोषणा गरेको एसियाका प्रभावशाली...
१. विपन्न विद्यार्थीको छात्रवृक्ति कोट ५३ हजार, अनलाइनबाट फारम भर्न नसक्दा १४ हजारमा सिमित
२. आज देश भरिको मौसम कस्तो रहला ? वर्षाको सम्भावना
३. लालपुर्जा नेपालको, जग्गा भने भारतमा
४. कोरोना कहरका बिच स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको सरुवा
५. संक्रमित बढेपछि कोरोना बिमा स्थगित
६. सीमा समस्यामा त्रिविले अनुसन्धान थाल्यो
७. क्वारेन्टिनमै जन्मिए दुई शिशु
८. आजबाट विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार
९. लकडाउनमा बजार नखुल्ने